अस्पताल बन्द हुँदा कसरी घटे आर्यघाटमा शव ? लकडाउन अघि औसत ३५ शव जल्ने पशुपति आर्यघाटमा अहिले १५ शव मात्र जल्दैछन्, किन ?
प्रदीप ढकाल काठमाडाैं, २२ चैत
पशुपति क्षेत्रमा काम गर्छु म । आजकल भक्तजनसँग खासै अन्तरक्रिया हुँदैन । भक्तजनको संख्या गन्न छाडेर आजकल शव गन्न थालेको छु । आज दिउँसो कार्यक्षेत्रमै हिँडिरहेका थियौँ ।
मेरा सहकर्मी कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले भन्नुभयो – सचिवज्यू, यो बेलामा घाटमा शवहरु निकै नै कम आइरहेका छन्, यसको कारण के होला ? हो त है – हामी मनन् गर्न थाल्यौँ । ‘बढी शव आउने ठाउँ अस्पतालहरु बन्द नै छन्’, ‘अस्पतालमै धेरैको ज्यान जाने रहेछ कि क्या हो ?’ – हामीले ठट्टा गर्यौँ ।
मेरो मनमा यही कुरा खेल्न थाल्यो । कोरोना कहरका कारण चारैतिर बन्द छ । मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कन पाएका छैनन् । सवारी साधन निकै कम छन् । मैले ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसएसपी मेरा बन्धु भीम ढकाललाई फोन गरेँ ।
उहाँले दिनुभएको जानकारी अनुसार औसतमा देशभरमा दैनिक ७ जना र काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक १ जना व्यक्तिको सवारी दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुँदो रहेछ ।
अस्पतालभन्दा बढी विद्यालयहरु नै खोल्ने हो कि ? अस्पतालहरु पूर्णरुपमा सरकारले नै चलाउने हो कि ? चिकित्सा शिक्षा लगायत अन्य शिक्षा क्षेत्र पनि पूर्णरुपले सरकारले नै चलाउने हो कि ! हाम्रो पूर्वीय दर्शन र पद्धति सिकाएर मानिसलाई प्राकृतिक रुपमै स्वस्थ राख्ने हो भने अस्पतालको आवश्यकता कम पर्दथ्यो कि ?
सरकार ! घर जान दिने कि सडकमै मरौँ ? ्
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २२, २०७६, ०८:२१:००